လူငယ်မျိုးဆက်သစ် ဘောလုံးဒိုင်လူကြီး သင်တန်း နိုင်ဝင်ဘာလအတွင်း ဖွင့်လှစ်မည် | The Ladies
Home » လူငယ်မျိုးဆက်သစ် ဘောလုံးဒိုင်လူကြီး သင်တန်း နိုင်ဝင်ဘာလအတွင်း ဖွင့်လှစ်မည်
လူငယ်မျိုးဆက်သစ် ဘောလုံးဒိုင်လူကြီး သင်တန်း နိုင်ဝင်ဘာလအတွင်း ဖွင့်လှစ်မည်
မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဒိုင်လုပ်ငန်းဌာနမှ ကြီးမှူးဖွင့်လှစ်မည့် လူငယ်မျိုးဆက်သစ် ဘောလုံးဒိုင်လူကြီး သင်တန်း (၂/၂၀၁၇) ကို နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်မှ ၁၆ ရက်နေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် တွင် ဖွင့်လှစ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း MFF ထံက သိရသည်။
လူငယ်မျိုးဆက်သစ် ဘောလုံး ဒိုင်လူကြီး သင်တန်း တက်ရောက်လိုသူများသည် -
** ဘောလုံးဒိုင်လူကြီး လုပ်ငန်းအား အမှန်တကယ် စိတ်ဝင်စားသူ
** မျက်မှန်တပ်ဆင်သူများ မဖြစ်ရ
** အနိမ့်ဆုံး ပညာအရည်အချင်း အခြေခံပညာ အထက်တန်းအဆင့် ရှိသူ
** အသက် ၃၀ နှစ်ထက် ကျော်လွန်သူများ မဖြစ်ရ
** သင်တန်းတက်ရောက် အောင်မြင်ပြီးလျှင် မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်၊ ဒိုင်လုပ်ငန်းဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်/ တိုင်း ဒိုင်ကော်မတီတို့တွင် ဒိုင်လုပ်ငန်း တာဝန်များ ထမ်းဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
အဆိုပါ သင်တန်း တက်ရောက်အောင်မြင် ပြီးသူများအား မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်၊ ဒိုင်လုပ်ငန်းဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်/တိုင်း ဒိုင်ကော်မတီများတွင် တရားဝင် မှတ်ပုံတင်၍ ဒိုင်လူကြီး တာဝန်များ ထမ်းဆောင်စေပြီး အရည်အချင်း ပြည့်မီသူများအား MNL ပြိုင်ပွဲများတွင် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း၊ နိုင်ငံခြားသင်တန်းများ စေလွှတ်ပေးခြင်း၊ ကမ္ဘာ့ အသိအမှတ်ပြု ဒိုင်လူကြီး (FIFA Referee) ဖြစ်လာစေရေးအတွက် ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းလည်း MFF ထံက သိရသည်။
စိတ်ပါဝင်စားသူများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်၊ ဒိုင်လုပ်ငန်း ဌာန၊ သုဝဏ္ဏဘောလုံးကွင်း (ဖုန်း၊ ၀၉ ၄၂၁ ၁၄၃ ၆၈၄၊ ၀၉ ၄၅၀ ၀၀၇ ၄၄၈၊ ၀၉ ၄၂၀ ၁၂၈ ၀၆၄၊ ၀၉ ၈၆၂ ၃၆၂၁) တို့သို့ ၂. ၁၁. ၂၀၁၇ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ စုံစမ်းစာရင်းပေးသွင်း နိုင်ကြောင်းလည်း သိရသည်။